Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) nhepfenyuro pane imwe nyaya inotyisa mazuva ano sezvo hutachiona hweIndaneti huchibva mumoto kubva kune dzimwe nzira. Makambani ari kuedza kuunganidza mamwe mashoko pamusoro pevashandisi vavo kusvika pakukwirira kwekunyanyisa (vanoda muenzaniso? Ichi, ichi, ichi, uye ichi) asi nyika dzakakamurwa pamusoro pekugadzirisa mamiriro.
* Heatmap yenzvimbo iyo NSA inounganidza dhidhiyo paIndaneti uchishandisa Boundless Informant, chinhu chikuru chekuongorora dhiyabhorosi chinoshandiswa neUnited States National Security Agency (NSA). Kunobva: Ο φύλακας
Kwemakore tave tichishandisa michina yakawanda yakadai seΒραζιλία, Google, Microsoft λογισμικό.
Uye apo hurumende dzinogona kuoma kuronga mamiriro acho ezvinhu, pane dzimwe nguva ivo ivo pachavo vane mhosva yezvivi zvakafanana izvo makambani ari kupinda mukutambudzika.
Saka, isu isu somunhu pachedu tingaitei kuti tidzivirire pfuma yedu yepaIndaneti; Mhinduro yacho inotitungamirira kumashure yedu yeVPNs.
0.0.1 Inyanzvi mazano Vamwe vanotarisira mumusika vangave vasina kutendeseka nemishandiro avo emabasa. Vanoti vanopa mashumo chaiwo munzvimbo dzakasiyana-siyana, asi vamwe vavo vari chaizvo. Mune mamwe mazwi, iwe unogona kunge wakabatana neseri iri mune imwe nyika, asi gamuchira kero ye IP yakagoverwa kune imwe nyika. Semuenzaniso, sevha muChinese inogona kunge yakabva kuU.S. Izvi zvakaipa nokuti izvi zvinoreva kuti data yako inopfuura nemaseva akawanda munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika vasati vasvika pakupedzisira. Ikoko hakuna chivimbo chokuti ma-cybercriminals, masangano emagetsi ekutsvaga, kana vashandi vekuvhiringidza kwekodzero vane ruoko rwavo kune rimwe remaseva aya ari pakati. Kuti udzivise nyaya iyi, vashandisi vanofanirwa kuitisa kuongororwa kwenzvimbo yeVPN chaiko. Pano pane zvishandiso zvina zvaunogona kushandisa – Ping Test Tool neApp App Synthetic Monitor Traceroute Tool neApp App Synthetic Monitor BGP Toolkit neEprican Electric Services Raira Prompt Tool aka CMD παράθυρο Windows – Hamza Shahid, BestVPN.co chibatiso
1.1.2 Πρωτόκολλο VPN kuenzanisa –
1.3 2- Πρωτόκολλο σήραγγας Chete 2 (L2TP)
1.4 3- Πρωτόκολλο Secure Socket Tunneling (SSTP)
1.5 4- Internet Key Exchange έκδοση 2 (IKEv2)
1.6 5- Πρωτόκολλο σήραγγας από σημείο σε σημείο (PPTP)
2 Μέθοδοι κρυπτογράφησης uye Strength
3 Αυτή η εμπειρία VPN Yangu
3.2 Σύνδεση στο Internet
3.3.1 1- Ροή
3.3.2 2- Κουρβισάνα
3.3.3 3- Κουτάμπα
4 VPN Inowanzobvunzwa Mibvunzo (Συχνές ερωτήσεις)
5 Mhedziso: Unoda VPN εδώ?
Vamwe vanotarisira mumusika vangave vasina kutendeseka nemishandiro avo emabasa. Vanoti vanopa mashumo chaiwo munzvimbo dzakasiyana-siyana, asi vamwe vavo vari chaizvo. Mune mamwe mazwi, iwe unogona kunge wakabatana neseri iri mune imwe nyika, asi gamuchira kero ye IP yakagoverwa kune imwe nyika. Semuenzaniso, sevha muChinese inogona kunge yakabva kuU.S.
Izvi zvakaipa nokuti izvi zvinoreva kuti data yako inopfuura nemaseva akawanda munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika vasati vasvika pakupedzisira. Ikoko hakuna chivimbo chokuti ma-cybercriminals, masangano emagetsi ekutsvaga, kana vashandi vekuvhiringidza kwekodzero vane ruoko rwavo kune rimwe remaseva aya ari pakati.
Ping Test Tool neApp App Synthetic Monitor
Traceroute Tool neApp App Synthetic Monitor
Raira Prompt Tool aka CMD παράθυρο Windows
Nhasi mabasa mazhinji eVPN ari kutanga kutora matanho makuru ekuchengetedza kubatsira vashandi vavo. Yakatanga kunyanya kubatsira kubvisa mutsara yekuunganidza data nekutsvaga asi ikozvino yawedzerwa kuisa ad-kudzivirira uye pane dzimwe nguva kunyange anti-virusi sarudzo.
Panyaya yakajeka, VPN inotanga kuisa purogiramu yekukurukurirana kubva pane yako. Πρωτόκολλο Iyi ichagadzirisa miganhu yekuti deta ichafamba sei kubva pane imwe yako kuenda kuV server yeVPN. Kune humwe humwe hutungamiri hweVPN hutsika hunozivikanwa, kunyange zvazvo imwe neimwe ine zvigaro zvayo uye zvisingabatsiri.
Kunyange zvazvo pane zvakawanda zvinyorwa zvekukurukurirana, pane zvimwe zvizhinji izvo zvinowanzotsigirwa pasinei neVPN μάρκα υπηρεσίας. Zvimwe zvinokurumidza, zvimwe zvinononoka, zvimwe zvakachengeteka, zvimwe zvishoma. Chisarudzo chako ndechokuenderana nezvaunoda, saka izvi zvingava chikamu chakanaka chaunofanira kuteerera kana iwe uri kushandisa VPN.
OpenVPN: Ανοιχτό ανοιχτό πρωτόκολλο iyo inofanirwa kukurumidza kusimbisa asi inopa yakasimba υποστήριξη κρυπτογράφησης.
Πρωτόκολλο VPN kuenzanisa –
Το OpenVPN είναι πρωτόκολλο VPN ανοιχτού κώδικα uye iyo yose isimba rayo pamwe chete nekushaya simba kwayo. Vhura zvinyorwa zvinyorwa inogona kuwanikwa nomunhu wese, zvinoreva kuti havasi ivo chete vanogona kushandisa uye vanovandudza mazviri, asi avo vasina vavariro dzakadaro vanogona kuongorora zvakare nekuda kwekushaya simba uye.
Kunyange zvakadaro, OpenVPN yave yakawanda chaizvo uye inoramba iri imwe yenzira dzakachengetedzwa zvakachengetwa. Iyo inotsigira zvakakwirira zvakadzama mazinga zvak pairisira kushandiswa kune dzakawanda se’kusadzika ‘256-bit key encryption inoda 2048-bit RSA kuvimbiswa, uye 160-bit SHA1 hash algorithm.
Kutenda kwaro kuva chinyorwa chakasununguka, chave chichishandurwa kuti chishandiswe pazvinenge zvose mapuratifomu nhasi, kubva paWindows neIOS kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana dzakadai sevarters nemichina michina seicharters.
2- Πρωτόκολλο σήραγγας Chete 2 (L2TP)
Chinyorwa 2 Tunnel Protocol (L2TP) ndicho chekudzorera Tarisa ku Point Tunneling Protocol (PPTP) uye Chinyorwa 2 Forwarding Protocol (L2F). Zvinosuruvarisa, sezvo zvisina kuuya zvakagadziriswa kuita zvinyorwa zvaiwanzogoverwa pamwe chete nePsec πρωτόκολλο ασφαλείας. Kusvika iye zvino, kusanganiswa uku kwave kuchionekwa senhare yakachengeteka uye isina hutachiwana huripo.
Chinhu chimwe chekucherechedza ndechokuti iyi πρωτόκολλο inoshandisa UDP pamusana we500, iyo inoreva kuti nzvimbo dzisingabvumiri VPN mvumo inokwanisa kuidzivirira nekudzivhara nyore nyore.
3- Πρωτόκολλο Secure Socket Tunneling (SSTP)
Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) imwe chete isingazivikanwi pakati pevanhu nguva dzose, asi inobatsira chete nokuti yakanyatsoedzwa, yakaedzwa uye yakabatanidzwa mune zvose zvinyorwa zveWindows kubva mumazuva aVista SP1.
Iyo yakachengetedzeka zvikuru, ichishandisa 256-bit SSL maki uye 2048-bit SSL / TLS zvitifiketi. Izvo zvinosuruvarisa kuti zvinowanikwa ku Microsoft, saka hazvizarurirwi kuongororwa kwevanhu – zvakare, zvose zvakanaka uye zvakaipa.
4- Internet Key Exchange έκδοση 2 (IKEv2)
Internet Key Exchange vhezheni 2 (IKEv2) yakagadziridzwa neMicrosoft uye Cisco uye pakutanga yaingoda senge tuninging protocol. Iyo saka zvakare inoita kushandisa IPSec yekunyorera. Hugariro hwayo mukubatanidzwazve kune yakarashika hukama hwakaita kuti huve hwakakurumbira pakati pevaya vanowedzera pazviri kutakurirwa kwenhare kweVPNs.
5- Πρωτόκολλο σήραγγας από σημείο σε σημείο (PPTP)
Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) ndeimwe yemadinosauri pakati pezvirongwa zveVPN. πρωτόκολλο yekare yeVPN. Kunyange zvazvo pane zvimwe zviitiko zvekushandiswa, iyi protocol yakave yakawira pasi parutivi rwomugwagwa nekuda kwemakororo makuru, akavhara mukuchengeteka kwayo.
Μέθοδοι κρυπτογράφησης uye Strength
Tora muenzaniso rimwe chete – Γάτα.
Kana ndikashandisa 256-bit κρυπτογράφηση kune rimwe shoko rimwe chete, rinenge rakatsvaira zvachose uye waitingaverengeki. Kunyangwe chikwata chemasimba chinotyisa zvikuru pasi pano chingazotora mamiriyoni emakore achiedza kubvisa izwi iro rimwe chete ne 256-bit κρυπτογράφηση yakashandiswa kwariri.
Uyewo, mazinga ekuteterera ari εκθετικό, κρυπτογράφηση saka 128-bit haipei hafu yekuchengetedzwa kwe256-bit κρυπτογράφηση. Kunyange zvazvo ichiri chinotyisa, nyanzvi dzinotenda izvozvo 128-bit κρυπτογράφηση ichakurumidza kuputswa.
Nzira idzi dzekunyorera uye simba zvinowanzoshandiswa zvinonongedza, zvichienderana neshoko ratinoshandisa, rakadai semamayari, προγράμματα περιήγησης, kana mamwe mapurogiramu. VPNs kune rumwe rutivi runotibvumira kuti tisarudze kuti ndeapi mhando dzekuteterera tinoda, sezvo rudzi rwedu rusingasarudze ruchachinja maitiro edu eVPN.
Nenzira iyi tinogona «kugadzirisa» kushanda kweVPN yedu. Semuenzaniso, vamwe vanogona kusarudza zvakanyanyisa kuvhara uye voda kuzvipira nokukurumidza. Vamwe vanogona kuda kukurumidza uye saka vanobvuma chikwata chezasi chekunyora.
Zvose izvi zvakakosha uye zvinoshandiswa nekuteterera nokuti kana iwe watopinda muSevhisi yeVPN, data yaunotumira kana uchiedza kutarisa Indaneti inopinda neCrypted σύνδεση VPN.
Αυτή η εμπειρία VPN Yangu
Ini ndave ikozvino kutsvakurudza, kuedza uye kuedza zveVPNs kuitira chikamu chakanaka chegore. Kunyange zvazvo in ndingave ndisati ndiri nyanzvi yezvigadzirwa zveVPNs zvakadaro, ndave nechokwadi ndakawana zvakawanda kupfuura zvandakambonyatsoda chaizvo nezvemashumiro aya.
Zvandinoongorora zvinosanganisira kushandiswa kweVPNs pane imwe nzvimbo yemauto, kusanganisira yavo Android εφαρμογές για κινητά, πρόσθετα προγράμματος περιήγησης uye nemhando dzakasiyana-siyana dzokushandisa. Vamwe ndakave ndakashamisika nazvo, asi vamwe vakanyadziswa mukati.
Ndinofanira kutaura kuti pamagumo ezuva, pasinei nokuti ine simba rekugadzirwa, hapana zvachose chikonzero chekambani yekambani idzi kuva nehutambisi webasa. Uye hongu, ndinoona kusakwanisa uye sloth se «basa rakaipa rekutengesa».
Pamusoro pezvikamu zvizhinji, kuedzwa kwangu kwakaitwa kuburikidza nevekuvhura vPN client kana kuti VPN app yakaiswa pane Windows-based μηχανή. Izvi zvinowanzoita zvakanaka, uye ndakaona kuti kazhinji ndiyo iyo iyo iyo yemabhuku yatinayo pamisha inogadzirisa VPN yedu kupfuura iyo pachayo pachayo.
Chinhu chinonyanya kukosha chandakadzidza pamusoro pemidziyo ndechekuti kana iwe unofunga kuendesa VPN zvakananga pa router yako, unofanirwa kuziva chimwe chinhu chinokosha – VPN yako fanira ine purogiramu-mbongoro purogiramu. Izvi zvinowanzosara kune «oh-yangu-Mwari» mutengo wevatengi vematareji asingasviki, uye kunyange zvakadaro, zvakanyanya.
Semuenzaniso, ndakaedza maVPN mashomanana pane zvakaderera Asus RT-1300UHP iyo kana yakaisvonaka kumisha yakawanda. Ichokwadi inogona kubata kunyange yakazara gigabit inokurumidza (kuburikidza neLAN) uye kusvika ku400 + Mbps pa WiFi. Asi yakangotarisa kuputika kwema XMUMX Mbps kamwechete iyo VPN yakagadzwa. Pariyo iyo, mushanduri wacho akanga atovhiringidza pa 10% nguva dzose.
Mhando ye router yaunoda yatinenge ichitaura iri mumutsetse we ROG Kubvutwa GT-AC5300 ή Netgear Nighthawk X10 – Inodhura uye kwete iyo inowanikwa kumhuri dzakawanda. Kunyange zvakadaro, kana Διαδίκτυο yako ichikurumidzira inokurumidza – chigumbuso chicharamba chiri router yako.
Pakutanga yaive yakanyanya kukurumidza kuedza, kungochengetedza ρεκόρ ρεκόρ pamwe nekuedza. Pane imwe nguva ndakangaa ndagadzira nheyo yepamusoro, ndakatanga kuedza dzimwe nzvimbo dzekutsvaga kana kutambira mavhidhiyo. Kune chikamu chikuru, ndakaona kuti inenge yose yeVPNs inokwanisa kubuda mavhidhiyo 4k UHD.
Ini handiri mutambo wakawanda (zvichida kwete mitambo inokosha kune VPN basa) asi in ndakatora nguva dzeping. Kana iwe uri mutambi achitarisira kushandisa VPN kuti uwane mutambo uri kunze kwenyika yako, unogona kuora mwoyo. Nguva dzeping dzinowedzera yakawanda iwe unowedzera iwe kubva kumaseva eVPN, kunyange kana kufamba kwakakurumidza uye kwakagadzikana.
VPN Inowanzobvunzwa Mibvunzo (Συχνές ερωτήσεις)
Kufanana nevose vanopa mabasa, makambani eVPN anoda kuti iwe ugare navo kwenguva yakareba, nekuti ndizvo zvavanowana. Vazhinji VPN vanopa vevashandi vanopa mazwi akasiyana siyana ekubhadhara senge pamwedzi, makota uye zvichingodaro. Nguva zhinji iyo yakareba hurongwa, hwakachipa yako pamwedzi rate, asi iwe unofanirwa kubhadhara yese contract pamberi. Tarisira kubhadhara pakati pemadhora mazana mapfumbamwe kusvika pamadhora gumi nemaviri pamwedzi paavhareji pazvibvumirano zvemwedzi, nezvikwereti zvinosvika 9% pazvibvumirano zvenguva refu.
Heino rondedzero ye yakanakisisa VPN Υπηρεσίες kwatinoenzanisa mitengo uye maficha.
Ko kushandisa VPN kunodzora internet yangu kukurumidza εδώ?
MaVPN anogadzirwa kutanga nekutanga kuchengetedza zita rako uye kuchengetedza δεδομένα rako. Nehurombo, imwe yemhedzisiro yekuvhara iyo inoshandiswa kuchengetedza data rako ndeyekuti inoderedza yako Διαδίκτυο yekubatanidza. Semitemo yezvigunwe, tarisira kuzadzikisa isingapfuuri makumi manomwe muzana yeiyo chaiyo yekumhanyisa mutsara paunenge uchishandisa VPN. Zvimwe zvinhu zvakadai sere kure kubva kuVPN server, server server uye nezvimwe zvichakanganisawo yako Internet kumhanyisa nguva uchishandisa VPN.
Υπηρεσίες υπηρεσιών Vazhinji VPN vanokuudza kuti havangadzore kumhanya kwako. Nekudaro, kune mamwe mamiriro ezvinhu ekufunga zvakare. Sezvambotaurwa pamusoro, kutarisira kuwana kwete inopfuura a yeyako chaiyo yekumhanyisa.
Nechekurudyi inofanirwa kuve yakapusa sekuisa εφαρμογή uye nekupinda rako rezita uye κωδικός πρόσβασης. Ipapo iwe zvese zvaunofanirwa kuita kunya bhatani uye iwe unenge wakabatana διακομιστής neVPN. Nehurombo, izvi hazviwanzo kuve mhinduro dzakanakisa uye zvimwe zvinongedzo zvingangoda kubhurwa kuitira kushanda kwakakwana. Vazhinji VPN vanoita sevashandi vakadai NordVPN, Surfshark uye ExpressVPN vachave nemafunduru ekuita izvi, vachikundikana iyo inguva yekusangana nevatengi vevashandi vevatengi.
Izvi zvinoenderana nekuti ndeipi VPN υπηρεσία υπηρεσίας yaunosaina nayo. Vanenge vese vanopa vanozotsigira Windows, MacOS, uye Linux pamwe nepamhepo nharembozha. Ανάπτυξη δρομολογητή Vazhinji vachabatsirawo () nepo vashoma vano chengetedza nemimwe michina mimwe midziyo yakadai seiyo Raspberry Pi.
Sezvo 256-bit κρυπτογράφηση ichanonoka kubatanidza kwangu zvakanyanya, zvakachengeteka kwandiri kuti ndishandise 128-bit κρυπτογράφηση?
Uku kuchenjera kudiki, kubva vakasimba. Mubvunzo waunofanirwa kunge uchizvibvunza wega unofanirwa kuva, «Yakawanda sei kuvanzika kwangu nekuchengetedzeka pamhepo kwakakosha kwandiri;»
Dzimwe mawebhusayithi dzinoedza kuchengeta vashandisi veVPN uye vane nzira dzekuona kana kupinda kusina kunobva kuVPN seva. Ndinofara, VPNs vanoziva izvi uye vauya nemiromo inobatsira iyo. Tarisa kune avo vanopa mazano vanopa Stealthing, kana Διακομιστής διακομιστή.
Ndinogona kungoshandisa VPN πρόγραμμα περιήγησης yekuwedzera?
Ndakatora zvishomanana zveVPN browser extension uye ndakaona kuti kune chikamu chikuru, izvi zvinowira mumapoka maviri makuru. Iko kune avo vanoita semapurojekiti uye vanongopedza kubatana kwako kubva kune sevhare, uye vamwe vanoita shanduro yekutsvaga kwekuzara kweVPN app. Izvozvo zvinoreva kuti iwe uchiri kuda chirongwa cheVPN chakaiswa kuitira kushandisa shanduro. Επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης VPN kazhinji haisi yeVPN yese.
VPNs zviri pamutemo kushandisa εδώ?
Χονγκ Γουάι Κουέτε. Kunyange nyika zhinji dzisina mitemo inopesana neVPN, vamwe vanodzivisa zvachose. Muzviitiko zvakanyanyisa, dzimwe nyika hadzingorambidza kushandiswa kweVPN chete asiwo dzinogona kushandisa jeri vashandisi veVPN. Nechemumoyo, kune chete vashoma nyika idzo VPN dzakarambidzwa kusvika zvino.
Mhedziso: Unoda VPN εδώ?
Kuvanzika kwepamwe pega paIndaneti zviri pasi pekukombwa kubva kune dzakawanda uye iyo inoratidzika kunge yakaitika usiku hwose. Takange tisiri mazuva apo taingofanira kungotinetsa chete pamusoro pevapanduki ve-cyber, asi iye zvino tinofanirawo kunetseka pamusoro pekambani uye hurumende dzinoda kutora δεδομένα yedu nokuda kwechikonzero chimwe zete – kushando.
Παγκόσμιο VPN maranho kukosha (mabhiriyoni, USD) – Kwakabva: Statista
Zvisinei, kubva pachiyero chekuwedzera kukosha kwenyika yose yeVPN yemari, Ini ndichataura kuti zvinenge zvichida iwe unoda imwe kamwe kana kuti gare gare. Iko nguva yapfuura apo vashandisi vese vakatanga kutora mararamiro avo uye kuchengeteka paIndaneti pasina uye vanotarisa nzira dzekuchengetedza ruzivo rwavo.